How'd it happen and more reports?: စကာင်္ပူစတော့ကို ဘယ်လိုစပြီး ၀င်ကစားမလဲ?
စတော့ရှယ်ယာတွေက်ကို နားလည်လုို့တော့ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ လူတိုင်သိထားသင့်တယ်လို့ထင်လို့ ရှာဖွေပြီး တင်ပေးလိုက်တာ၊ မကြာမှီ အမိမြန်မာမှာလဲ ဒီလိုစတော့လေးတွေ ပေါ်ထွက်လာစေတယ် လေ၊ အခုလဲ လေ့လာနေတုန်ဘဲ....သိတာမြင်ရတာတွေကို တောက်လျှောက်ရေးတင်သွားပေးမှာပါ၊
စိတ်သင်စားရင်တော့ ကျွှန်တော်ဒီဘလော့မှာဘဲ ၀င်ကြည့်လေ့လာနိုင်ပါတယ်၊ ဒါက စီပွားဖြစ်ကစားရ တဲ့ ဆိုဒ်လဲဖြစ်ပါတယ်၊ စက္ကန့်လိုက် မီနစ်လိုက် ကစားလို့ရပါတယ်၊ ငွေရင်း စစချင်းတော့ Deposit $ 1000 လောက်ကနေ စ၀င်ကစားရတာပါ၊ ဒါပေမဲ့ ကုမ္ဗဏီတွေရဲ့ စတော့သတင်းတွေ ကိုတော့ တောက်လျှေက် သတင်းနားထောင် သတင်းလေးတွေ ဖတ်ပေးမှာရပါတယ်.. .http://finance.yahoo.com/,http://www.sgx.com/wps/portal/sgxweb/home,http://www.bloomberg.com/news/stocks/,http://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks,http://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks
ဒီလိုဘဲ ကနေဒါက အကိုက စတော့စဖွင့်တဲ့ အချိန် သူတို့မနက်စောစောအချိန်(ဒီမှာ ညဖက် ၁၀နာရီ) တရက် ၂နာရီ ၃နာရီပုံမှန်ဝင်ကစားနေတာပါ၊သူက စက္ကန့်ပိုင်းဝင်ကစားတာပါ၊ တရက် အနည်းငယ် မြတ်တာနှင့် အနိုင်ပိုင်းပြီး ရက်၃၀ လုံးဝင်ကစားနေတာ အခုဆို အိမ် ၂လုံးလောက်ပိုင်သွာပြီဗျ...
ဘာမှမတတ်သေးရင် free သင်တန်းလေးတွေလဲ ရှိပါတယ်၊ စိတ်ဝင်စားရင် ၀င်လေ့လာနိုင်ပါတယ်၊
ဒီလိုမှ မကစားချင်ရင်တော့ လစဉ်မိမိ Saving A/C ထဲက နေလစဉ် $ 100 ပုံမှန်ဖြတ်သွားပြီး ဒီအောက်က ဘဏ်တွေမှာ ၀င်ဝယ်လဲရပါတယ်....
နောက်ပြီး မိမိတို့ရဲ့ CPF ထဲက ငွေ$ 30,000 ကျော်ရင် ရွှေဝယ်မလား၊ စတော့ဝယ်မလား ဆိုတာ ရှိပါသေး တယ်၊ ဒါကိုလဲ မသိတဲ့လူတွေအမျာကြီးပါနော်၊